सरकार बनाउने र गिराउने खेलले राजनीतिक अस्थिरता : भट्टराई - Peacepokhara.com
सरकार बनाउने र गिराउने खेलले राजनीतिक अस्थिरता : भट्टराई
पिस पोखरा ९ श्रावण २०७३, आईतवार ०५:००
पोखरा ९ साउन । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बावुराम भट्टराईले सरकार बनाउने र गिराउने खेलले पुन राजतीतिक अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रास्तावमाथि मतदान हुने दिन उहाले पुराना राजनीतिक शक्तिहरुको कारण देश पुन अस्थिरतामा जान लागेको बताउनुभयो ।
प्रेस सोसाईटी कास्कीले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले नयाँ संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र संबृद्धि पाउने जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको बताउनुभयो । देश र जनताको चासो भन्दा पनि पार्टी, ब्यक्ति र गुठको निम्ती कुर्सीका लागि लड्ने परम्परा दुखद भएको उहाको टिप्पणी छ ।
डा. भट्टराईले सरकार परिवर्तनको खेलमा नयाँ शक्तिको कुनै संलग्नता र चासो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । शासकिय स्वरुप परिवर्तनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको पक्षमा जनमत सिर्जना गरिने उहाले बताउनुभयो । उहाले आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने लक्ष्यको साथ संगठन विस्तारको काम भैरहेको बताउनुभयो ।
९ श्रावण २०७३, आईतवार ०५:००
शिशुवा– आरुपाटा – भैसे ग्रामिण सडक मर्मत कार्य सुरु
पिस पोखरा ७ असार २०७२, सोमबार ०७:००
बुटवल, वालिङ र पाल्पामा सडक महोत्सवको प्रचार
कृष्ण दवाडी ३ पुष २०७५, मंगलवार १५:००
पूर्वसंचार मन्त्रीले हराए बर्तमान संचारमन्त्री
कृष्ण दवाडी २३ मंसिर २०७४, शनिबार ०२:००